Shina : mampalahelo ny tongotr’i Liu · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2008 22:13 GMT
Voatery niala an-daharana ilay mpihazakazaka kalaza, tompon-daka eran-tany amin'ny 110 metatra misy fefy tamin'ny lalao Olympika tany Athena, Liu Xiang androany maraina (ora any Shina) noho faharariana tamin'ny tongony.
BEIJING (AP) – Niala an-daharana tamin'ny hazakazaka 110 metatra misy fefy i Liu Xiang, izay tokony hiaro ny maha-tompondakan'ny lalao olympika azy, rehefa avy naratra tamin'ny fiaingana mialoha ny fotoana.
Efa niainga alohan'ny fotoana i Liu, ary nihazakazaka nihoatra ny fefy roa. Nijanona tampoka nefa izy ary hita fa nikentrona naharary. Taorian'ny fialana alohan'ny fotoana nataon'ny mpifaninana iray hafa, talohan'ny hanombohan'ny lalao indrindra dia niala an-daharana i Liu. Nihoraka noho ny fahatairana sy ny alahelo ny mpijery ary nangina be ny kianja avy eo.
Efa taratra ihany iny zava-nitranga iny omaly. Nilaza i Sun Haiping, mpanazatra an'i Lui Xiang, fa naharary ny vody tongotr'i Lui hatramin'ny fanazaran-tena tamin'ny faha-16 Aogositra. Mbola nanantena ihany ny sinoa maro fa tetika ihany iny, na dia efa voamarina aza fa naratra i Liu.
Hifanosehana ny hevitra mandeha ao amin'ny Fanfou.com, ny twitter an'ny sinoa, taorian'ny nahitana an'i Liu nandao ny toerany tamin'ny endrika maloka.
Tsy hisy zavatra hampalahelo noho iny fialan'i Liu Xiang iny mihitsy amin'ity lalao ity.
Ontsa ny fon'ny olona an-tapitrisany noho ny fialan'i Liu Xiang. Tsy hampalahelo ve ny lalao Olympika tsy misy an'i Liu Xiang ? Tsy hangingina ve ilay “tranom-borona” nilaozan'i Liu Xiang ?
Misy milaza fa samy nahazo vitan-dratsy avokoa ireo mpanao fanatanjahan-tena hita tamin'ny dokambarotry ny Adidas tato ho ato.
Tena namosavy mihitsy ny dokambarotry ny Adidas tamin'ity lalao Olympika ity.
Toa samy voa tamin'io daholo na ny tarika vehivavy mpilalao volley, na ilay mpilalao baolina Zhengzhi, ary izao indray dia i Liu Xiang.
Misy koa nefa ireo nanome tsiny an'i Liu Xiang :
Liu Xiang, tsy tamin'iny fifaninanana iny ihany no nianjera ianao, fa tamin'ny toe-tsaina olympika mihitsy.
Notoherin'i 微笑綻放 izany, ary betsaka no mitovy hevitra aminy 12:20
Izany no atao hoe fifaninana ara-panatanjahan-tena. Ianareo ireo, ireo olona tsy mahay na inona na inona akory ankoatra ny manome tsiny ny olona ! Mitehaka ery ianareo rehefa mandresy izy, nefa raha vao manomboka mirodana ny nofinofy amin'ny medaly volamena dia iny fa manome tsiny. Maninona raha ovaina hoe fandrombahana medaly volamena ny anaran'ny lalao Olympika ?
Sary mihetsika kosa no fahitan'ny olona mpankafy aterineto iny zava-misy iny :
Tena tsara be ilay tetika !
Hitako fa natanjaka lavitra noho i Liuxiang mihitsy i Robles amin'izao. Ka ahoana no tokony hiatrehan'i Liu an'izany ? Raha tsy mivoaka mpandresy izy, izay inoako fa tena mety nitranga tokoa, dia hihena be ny lazany amin'ny lafiny varotra, sy ny fitiavan'ny vahoaka azy. Inona no ho nataoko raha izaho no tamin'ny toerany ?
Iny zava-niseho androany iny no hany azon'i Liu natao mba hahazoany tombony be indrindra. Samy voahazony daholo ny fitiavan'ny vahoaka azy, indrindra ny lazany amin'ny resaka varotra.
Ankafiziko mihitsy ny tarika mpanohana azy ao.
Efa namidy tamin'ny aterineto nefa ny tapakila hidirana amin'ny famaranana amin'ny hazakazaka misy fefy.
Na inona na inona nefa feo miparitaka, dia misy manohana hatrany i Liu.
Hoy i 小凤儿 tao amin'ny Fanfou :
Tokony mba mampiseho fandeferana kely isika. Na dia niala tamin'ny lalao Olymbika teto Beijing aza i Liu dia mbola mpandresy ihany izy ao am-pontsika.